Ndị Mmụọ Ozi Hà Nwere Ike Inyere Gị Aka? Ihe Ndị Mere Eme Anyị Kwesịrị Ichebara Echiche
Ndị Mmụọ Ozi Hà Nwere Ike Inyere Gị Aka?
E nwere otu nwoke bi na Kurasau, aha ya bụ Kenneth. Ya na Filomena nwunye ya gara ịmụrụ otu di na nwunye Baịbụl n’ehihie otu ụbọchị Sọnde.
Kenneth kwuru, sị: “Mgbe anyị ruru, anyị hụrụ na ụlọ ha mechiri emechi. Ụgbọala ha adịghịkwa ebe ahụ. Ma obi m gwara m ka m kpọọ nwunye nwoke ahụ n’ekwentị.”
Nwaanyị ahụ zara ma gwa ha na di ya gara ọrụ. Ma, mgbe ọ matara na Kenneth na Filomena nwunye ya nọ n’ihu ụlọ ha na-akpọ, ọ pụtara ma sị ha bata n’ime.
Ha chọpụtara ozugbo na nwaanyị ahụ nọ na-ebe ákwá kemgbe. Mgbe Kenneth na-ekpe ekpere tupu ha amalite ịmụ Baịbụl, nwaanyị ahụ bewere ákwá ọzọ. Kenneth na nwunye ya jizi nwayọọ jụọ ya ihe merenụ.
Nwaanyị ahụ gwara ha na ya chọburu igbu onwe ya tupu ha abịa. Ọ gwara ha na ya nọ na-ede akwụkwọ ozi ọ ga-eji gwa di ya na ya ji aka ya gbuo onwe ya mgbe Kenneth kpọrọ ya. Ọ gwakwara ha na ike ụwa na-agwụ ya. Ha gụziiri ya ihe ụfọdụ na-akasi obi na Baịbụl. Ihe ndị a ha gụụrụ ya zọrọ ya ndụ.
Kenneth sịrị: “Anyị kelere Jehova maka iji anyị nyere nwaanyị a aka. Karịchaa, maka iji mmụọ ozi ma ọ bụ mmụọ nsọ ya mee ka anyị kpọọ nwaanyị a n’ekwentị.” *
Ihe a Kenneth na Filomena kwuru na Chineke ji mmụọ ozi ya ma ọ bụ mmụọ nsọ ya mee ka ha kpọọ nwaanyị ahụ n’ekwentị, ọ̀ bụ eziokwu ka ò mere ná ndabara?
Anyị amaghị. Ma, anyị ma na Chineke na-eji ndị mmụọ ozi ya enyere ndị mmadụ aka ịbịa fewe ya. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na Chineke ji mmụọ ozi ya gwa Filip onye na-ekwusa ozi ọma ka ọ gaa nyere otu nwoke onye ọnaozi Itiopia aka. Nwoke ahụ nọ na-achọ onye ga-akụzikwuru ya gbasara Chineke.​—⁠Ọrụ Ndịozi 8:​26-31.
Ọtụtụ okpukpe na-akụzi na e nwere ndị mmụọ ozi. Ha na-akọwakarị ndị mmụọ ozi ka ndị mmụọ nwere obiọma. Ha na-ekwukwa na e nwere ndị nke ọrụ ha bụ ịga mezuo ihe ọ bụla Chineke chọrọ, nweekwa ndị nke ha bụ ilekọta ndị mmadụ n’otu n’otu. Ọtụtụ ndị kweere na ndị mmụọ ozi dị nakwa na ha na-enyere ha aka. Ma, e nwekwara ọtụtụ ndị na-ekweghị na e nwere ndị mmụọ ozi.
È nwere ndị mmụọ ozi n’eziokwu? Ọ bụrụ na e nwere, olee otú ha si malite? Olee ihe ndị bụ́ eziokwu gbasara ndị mmụọ ozi? Ndị mmụọ ozi hà nwere ike inyere gị aka? Ka anyị lee ihe Baịbụl kwuru.
^ para. 8 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.​—⁠Abụ Ọma 83:⁠18.